Yakavanzika Mutemo - WebSetNet
Yedu webhusaiti kero ndeiyi: https://websetnet.net.
Information Collection uye Shandisa
Tichiri kushandisa Sevhisi yedu, tinogona kukukumbira kuti utipe ruzivo rwunozivikanwa iwe pachako runogona kushandiswa kubata kana kukuzivisa iwe. Ruzivo rwunozivikanwa ("Ruzivo rweMunhu") rwunogona kusanganisira, asi harungogumira kune:
Isu tinounganidza ruzivo urwo rwunotumirwa nebrowser yako pese paunoshanyira Service yedu ("Log Data"). Iyi Log Data inogona kusanganisira ruzivo rwakadai sekomputa yako Internet Protocol ("IP") kero, browser mhando, browser vhezheni, mapeji eSevhisi yako yaunoshanyira, nguva uye zuva rekushanya kwako, nguva yakashandiswa pamapeji iwayo uye zvimwe nhamba.
Google, seyechitatu mutengesi, inoshandisa makuki kushambadzira kushambadziro paSevhisi yedu. Kune mamwe maratidziro ekuratidzira, ivo vanogona zvakare kugovaniswa nevanowanzoshandisa vashambadzira tekinoroji vanopa (zvakanyorwa pazasi):
 7.ai (anotsiva EngageClick)
Mamirioni Ads Akatemerwa
A1 Media Boka
Ad Optima Dhijitari
Adapt Retail - Yekushambadzira Platform
AdLib Dhijitari Yakatemwa
Adobe Kushambadzira Cloud *
yepamusoro STORE GmbH *
Amino Kubhadhara, Inc.
Amp.ai neScaled Inference
AppNexus (Xandr) Inc. *
bam! Inopindirana kushambadzira GmbH
Bauhof Boka AS
BDSK Anobata GmbH & Co KG *
Blue Chiso co., Ltd.
Chiteshi China Terevhizheni Corporation
Coastal Dhijitari Boka
UnganidzoAd Realtime GmbH
Inokosha Interactive Inc.
Czech Muparidzi Shandure zspo
Delta Zvirongwa *
Zvinoda Side Science, Inc.
Dhijitari Ad Maitiro, Corp.
Dhijitari Hub Hannover GmbH
DPG Midhiya BV
Simba 1001 GmbH
EASY Kushambadzira GmbH
[email inodzivirirwa] kukurukurirana
mativi mana akaenzana
Fractional Midhiya *
FUSIO NES4M *
GDM Services, Inc d / b / Fiksu DSP
GP Mumwe *
HasOffer - Tune, Inc.
Hunhu Hwakagadzirwa Mashini
Chigadziro Chekutanga *
Index Shanduko *
Inotapukira Midhiya *
Yakabatana Ad Sayenzi *
Interpublic Boka *
Fenicha yeJYSK LINNEN'N OÜ
kutungamira mubatanidzwa GmbH
Tsamira Dhijitari Midhiya
LIDL SUPERMERCADOS, SAU
Macromill boka *
Kushambadzira Sayenzi Yekubvunzana Boka, Inc. *
Media Lab Zvishoma
Maitiro Midhiya Njere
MindTake Tsvagiridzo *
Mixmarket Yakabatana Network
Mobvista / Sanganisa
modellbau zvakasikwa GbR
MoPub (chikamu che Twitter, Inc.)
Nano Inopindirana *
Pedyo Pte Ltd
Neodata Boka *
Nhanho Inotevera - Inobatanidza Kushambadzira
InoteveraRoll, Inc. *
Nordisk Firimu A / S.
Chinangwa Partner *
Omnicom Media Boka *
PaKutsvaga Kwechigadzirwa *
Gonesa LCC DBA Genius Tsoko
Oracle Dhata Cloud *
OTM Pasi Pose LLC
Phoenix Kushambadzira International
Pi-chiyero / pubintl
Chirongwa Ecosystem LLC
Dziviriro Midhiya *
Pulpo (Iyo Inotungamira Kambani)
Yakachena Yemunharaunda Media GmbH
Rakuten Kushambadzira *
Reas Kufamba Boka
Mupanduki AI LLC
Tsvuku Cubes Ltd.
Kugadziriswa Midhiya *
Retube Inopindirana Vhidhiyo
Roy Morgan Tsvagiridzo
RTB Imba *
SAS Imwe Planet Chete
Sefa Midhiya *
Sirivha Yai Technology
Mari yezvikamu Snapupp Technologies SL
Chitubu Venture Boka
Nhanho A / S.
Stratio Huru Dhata
TACTIC ™ Real-Nguva Kushambadzira *
Taiwan Mobile Co Ltd.
Iyo MediaGrid Inc.
Iyo Yekutengeserana Dhesiki *
Iri Boka Chairo
YakazaraJobs Boka Ltd.
vateereri vekufamba - An Amadeus Kambani *
Kufamba Dhata Mubatanidzwa *
True Wave Technologies Limited mutengo wemari yakaitika
Umeng Plus Beijing Technology Limited Kambani
VF Kutaridzika Fantastix Tanner
Vhidhiyo Ongororo Inopindirana
Pfungwa Dzakanaka *
Ndeipi UK Ltd.
Nzvimbo yakafara *
纪富轩 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司
信息 泛 为 有限公司 有限公司
Cookies mafaera ane diki dhata, ayo anogona kusanganisira isingazivikanwe yakasarudzika chiziviso. Cookies inotumirwa kune yako browser kubva pawebhu saiti uye inochengetwa pane yako hard drive yekombuta.
Isu tinoshandisa "makuki" kuunganidza ruzivo. Unogona kuraira bhurawuza rako kuramba makuki ese kana kuratidza kana cookie iri kutumirwa. Nekudaro, kana iwe usingagamuchire makuki, unogona kusakwanisa kushandisa zvimwe zvikamu zveSevhisi yedu.
Tinogona kushandisa makambani evanhu vatatu uye vanhu varipo kuti vaite basa redu, kuti vape Service nokuda kwedu, kuita mabasa ane chokuita neHurumende kana kuti kutibatsira pakuongorora kuti basa redu rinoshandiswa sei.
Aya mapato matatu ane ruzivo rweMashoko ako ega ega kuti aite mabasa aya nekuda kwedu uye anosungirwa kuti arege kuudza kana kuishandisa kune chimwe chinangwa.
Kuchengetedzwa kweMashoko ako ega ega kunokosha kwatiri, asi yeuka kuti hapana nzira yekutsvaga paInternet, kana nzira yekugadzira magetsi ndeye 100% yakachengeteka. Kunyange isu tichiedza kushandisa nzira dzekutengeserana dzinogamuchirwa kuchengetedza Ruzivo Rwako Somunhu, hatigone kuvimbisa kuchengeteka kwayo zvachose.
Zvisungo Kune Dzimwe Nzvimbo
Basa redu rinogona kunge rine zvigaro kune dzimwe nzvimbo dzisingashandisi nesu. Kana iwe ukanyora pane chechitatu chekubatanidza, iwe uchatungamirirwa kune iyo yechitatu yepaiti. Tinokuraira zvakasimba kuti uongorore Purogiramu Yechirangariro yewebsite yaunoshanyira.
Hatina simba rekutarisa, uye hatifungi nezvemhosva yezviri mukati, mazano ehupachena kana maitiro epiro rechitatu remasayiti kana mabasa.
Basa redu haritauri ani zvake ari pasi pezera re 18 ("Vana").
Isu hatizivi kuti tinounganidza ruzivo rwemunhu ari pasi pe 18. Kana iwe uri mubereki kana muchengeti uye iwe unoziva kuti mwana wako akatipa neMashoko Evanhu, tapota taura nesu. Kana tikaona kuti mwana ari pasi peCNUMX akatipa neZvo Rega, tinobvisa ruzivo rwakadaro kubva kumaseva edu pakarepo.
Kuchinja KuNzvimbo Yechirongwa Chekuita
Isu tinogona kuvandudza mararamiro edu ezvimedu nguva nenguva. Tichakuzivisa iwe nezvekuchinja kupi zvako nekutumira Purogiramu Yechirangaridzo mutsva peji ino.
Iwe unorayirwa kuti uongorore iyi Purogiramu Yechirangaridzo periodically kune chero shanduko. Kushandurwa kweNyaya yeChinyorwa Chekuita neIndaneti inoshanda kana ichinyorwa pane peji ino.